Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa loo soo dhiibay kooxdii ka tagtay SilentCry ee ku biirey SC
Maxaa loo soo dhiibay kooxdii ka tagtay SilentCry ee ku biirey SC
Shacabkii halgan gobanimadoon ku jira waa inuu ogyahay taariikhda shucuubtii soo halgantay suu u fahmo brobagaanda gumaysiga iyo waxa saldhiga u ah. Hadaad baadhitaan ku samayso arintaa waxaa ku soo baxaysa in brobagaandada gumaysiga ay ku warwareegto un 3ex qodob oo la yaqaano.
1- Nabada iyo xasiloonida ayaan ilaalinaynaa.
2- Horumar ayaan wadnaa.
3- Naftood-hurayaashii way isa soo dhiibeen.
Mana aha arin lala yaabo, sababtoo ah gumaysiga waxaa ka jooga dalka uu gumaysto ciidan cabsanaya oo doonaya inay nabadgalyo ku dhex joogaan shacabka uu gumaysto. Suu ciidankiisa uga helo badbaado ay ku dhex joogaan shacabka wadanka leh ee u halgamaya inay ka xoroobaan gumaysigiisa, waa inuu yidhaahdo horumarkaa ayaan idiin sameeyay, qaar kalena waan idiin soo wadaa. Suu uga ansixiyo caalamka inay dhamaatay colaadii oo shacabkii la gumaysanayay ay ogolaadeen gumaysigiisana waa inuu yidhaahdaa dhalinyaradii la duufsaday ee hubka qaaday ee ciidankayga la dagaalamayay way ka tawbad keeneen hadda oo waa kuwan isa soo dhiibay.
Meel kastoo uu gumaysi ka jiro, kacdoon gobanima doon ahna uu ka bilowday, borobagaandada gumaysiga sidaa umbay isugu taxnayd ilaa dalka laga saarana wuxuu gumaysiga si joogta ah u soo celcelinayay 3exdaa qodob un.
Sidaa darteed; qof kasta oo Somali ah oo gumaysiga u taga qodobadaa umbaa loo soo dhiibaa inuu ka hadlo. Waliba wuxuu u doortaa gumaysiga iibgaynta qodobadaa qofka bulshadiisa ku dhex yeesha magac iyo qof ururka gobanimadoonka ah ka mid ahaan jiray ama sheegta inuu ka mid ahaan jiray.
Hawlaha laga doonayo inay fuliyaan kooxdii ka goosatay dhalinyaradii SilentCry waxba kama duwana qodobadaa caadiga ah ee gumaystaha uu iibgeeyo. Qofkasta oo gumaysi u tagay oo isku dayay inuu badeecadiisaa u gado, sharaftii iyo magacii iyo qadarintii uu bulshadiisa iyo caalamkaba ku dhex lahaa umbuu ku waayaa. Sababtoo ah, baniaadamka wuxuu ku qadariyaa qofka aaminaadiisa mabda’aa caalamiga ah ee xoriyad jacaylka ah ee dulmi iyo gumaysi diidka ah. Meel kastoo ay tagaan caalamka kooxda SilentCry waxay bulshada S.Ogadenya ku soo dhaweynayeen qalbi furan iyo mashxarad. Waxayna u suurtagaliyeen jaaliyadaheena inay meelwalboy tagaan u furaan albaabada dawladaha ay dhalashadooda haystaan.
Hadaba, canaasirtii ka dooratay sharaftii caalamiga ahaydee ay ku dhex lahaayeen SilentCry, maxay ka dheefeen markay noqdaan SexCry sida ay sheegeen saaxiibadoodii ay ka tageen, ama ka muuqata asluubtooda iyo sawirada laga hayo?
Sow ma noqonin qaar aan soo dhex gali karin bulshadoodii shalay u heelanayd ee sharafta iyo mudnaanta ay ku dhex lahaayeen. Gabdhihii iyo caruurtii ay shalay ku booqdeen xeryaha qaxootiga ee ku aaminay inay u sheegaan dhibaatadii uu gumaysiga soo mariyay miyay dhex tagi karaan maanta? Intay dhoofaan meel aan ahayd safaaradaha Itobiya miyay dhex tagi karaan?
Waxaa la soo ogaaday in uu Cabdi iley ka baryay safiirka London u jooga Itobiya in xafiis yar laga siiyo safaaradda dhexdeeda si teleefoonada ay ugu shaqaynayaan Itobiya uga dirsadaan. Waxaa kaloo la hayaa waraaqihii ay u qoreen dadkii ay la xidhiidhi jireen waagii ay ahaayeen SilentCry ee ahaa siyaasiyiin ama ururada madaniga ah iyagoo doonaya inay ka iibiyaan badeecadda gumaysiga ee ka kooban 3exdii qodob iyo jawaabaha la siiyay.
Hadal iyo, dhamaan qofkii qadiyadda gobanimadoonka ee shacabka Somalida Ogadenya u soo galay dana gaar ah iyo ku danaysi wuxuu ku dambayn un gumaysiga inuu u noqdo Salesman waliba raqiis ah.
Ugu dambayn, waxaan soo bandhigi doonaa goor aan fogayn waraaqo muhiim ah oo arimahaa ku saabsan.